Madajazzcar : Seho maroloko etsy Antsahamanitra -
AccueilVaovao SamihafaMadajazzcar : Seho maroloko etsy Antsahamanitra
Madajazzcar : Seho maroloko etsy Antsahamanitra
06/10/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Fotoana iray andrasan’ny mpankafy jazz ao anatin’ny hetsika Madajazzcar ny seho etsy Antsahamanitra. Anio manomboka amin’ny 1 ora antoandro no hanolorana ny « Madajazzcar », izay ahitana mozika maroloko. Hifarimbona hanafana ny « Podium jazz », izay seho maimaimpoana, ireo mpanakanto malagasy sy ireo mpanakanto vahiny nasaina. Hisantatra ny fampisehoana ny Trade Union (nandresy tamin’ny fifaninanana Tremplin Madajazzcar 2017), ary nanasa an’i Isaia Ratsizakaina. Hanampy azy ireo mpitendry malagasy. Aorian’izay dia hifandimby hanafana ny sehatra ry Jazz Quart, ilay mpanakanto avy any Sénégal Ablaye Cissoko, ilay amerikana Denia Ridley, ny Basse en chœur nanasa an’i Mendrika Rasolomahatratra, Silo ary Edgard Ravahatra.
Manomboka amin’ny 7 ora hariva dia toerana telo no hampiantrano ireo seho takariva dia ny Fara West etsy Faravohitra amin’ny « Jazz Manouche » ahitana an’i Benjamin Le Faucheur (guitare), Joro Rakotozafiarison (guitare), Anjara Rakotozafiarison (guitare), Vatsiahy Ravaloson (contrebasse), Kevin Mirija (saxophone), etsy amin’ny Ravimpotsy Tsiadana kosa no ahitana an’i Silo ary ilay mpanakanto amerikana Denia Ridley no hanafana ny Le Louvre Antaninarenina.
« Jazz brunch » indray no atolotry ny Akoa Hôtel etsy Ivandry rahampitso ary hiarahana amin’i Voahirana Andrimabelo sy ny ekipany. Etsy amin’ny Karibotel kosa takariva manomboka amin’ny 7 ora hiarahana amin’ny tarika Tower .
Ela nitoratorahana ka nahavoa voamason’angatra. Raha mbola afaka niery nandritra ny volana maromaro sy fotoana naharitra taorian’ny fanambaran’ny jeneraly Florens Rakotomahanina, lehiben’ny CIRGN, ny faramparan’ny volana Septambra teo, amin’ny tsy maintsy hisamborana azy ilay mpikambana ...Tohiny
Fanirisoa Ernaivo : Hanome vahana ny « tsimatimanota »